देश/विदेश प्रमुख « Clickmandu
रेष्टुराँमा लाइन लाग्दा फुरेको आइडियाले जन्मिएको ‘जोमाटो’ भयो
पेगासेज प्रयोग गरेर यसरी गरियो जासुसी, नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको फोन समेत ट्याप
एजेन्सी । पछिल्ला केही दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा एउटा विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । त्यो विषय हो, व्यक्तिको वैयत्तिक विषयमा गुप्त तवरले चासो राख्न पाइन्छ कि पाइदैन ? तर, गुप्त
ओलीको हतारोले माथिल्लो तामाकोशीमा समस्या
काठमाडौं । प्राविधिकले परीक्षणको क्रममा नै भनेका थिए, हतार नगरौं, उपकरणले काम गर्छ गर्दैन हेर्न बाँकी नै छ । सबै काम भएपछि उद्घाटन गरौंला । यत्रो लामो समय त बिताइयो,
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न थालेका छन् । बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अनुमानित नाफाको हिसाब गरी साउनमा कर्मचारीलाई १ महिनादेखि ५ महिनासम्मको बोनस वितरण गरेका
कञ्चनपुर दोधरा चाँदानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि समितिले पायो ईआईएको स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पहिलो पटक बनाउन लागेको कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह अर्थात एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।
रेलको सपना बाँड्ने ओली, रेल नगुडाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए
काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाई जनमत पाएका खड्गप्रसाद ओलीले यसबीचमा राम्रै सपना बाँडे- रेल र पानीजहाजको । गत असोजमा हतार-हतार भारतबाट रेल पनि आयो । तर, लज्जाजनक कुरा के छ भने
लगातारको तापक्रम वृद्धिले पानीको मात्रा ८ देखि १२ प्रतिशत बढ्ने, के यसले जोखिम निम्त्याउँदैछ ?
काठमाडौ. । जलवायु परिवर्तनको असरले सन् २०५० सम्ममा पानीको मात्रा ८ देखि १२ प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्ने विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदरमा अहिलेकै अवस्था रहेमा पृथ्वीमा
वायुसेवा निगमका अपरेशन डाइरेक्टर दीपु जुहार्चनको नियुक्ती गैरकानूनीः सतर्कता केन्द्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल वायुसेवा निगमको अपरेशन निर्देशक दीपु जुहार्चनको नियुक्ती गैरकानूनी भएको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रहरी उपनिरिक्षक राजेन्द्रकुमार पोखरेल, प्रहरी नायव उपरिक्षक बुद्धिराम खनाल र
उपत्यकामा ४ आनाको जग्गामा साढे २ तले घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ?
काठमाडौं । के तपाईं काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर बनाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण खर्च कति लाग्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । घर बनाउँदा प्रायजसो सोचेको र निर्धारित